MASOIVOHO JIRAMA – Nofanina ireo mpandray ny mpanjifa | JIRAMA
MASOIVOHO JIRAMA – Nofanina ireo mpandray ny mpanjifa
Manatsara hatrany ny fifandraisana amin’ny mpanjifa ny JIRAMA. Misy ny atrikasa fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo « Chargés de clientèle » eny anivon’ny masoivohon’ny JIRAMA manerana an’Antananarivo sy Antsirabe, izay tarihan’i Rivo Radanielina (Directeur Général Adjoint Marketing, Digitalisation et Vente).
Nosokafana androany 09 martsa 2020 izany ary haharitra herinandro, eny amin’ny foibe fanofanana mpiasa eny Ambohimanambola. Hiitatra amin’ireo masoivohon’ny JIRAMA manerana ny Nosy ny fampiofanana ary hisokatra amin’ny sokajin’asa hafa mifandray mivantana amin’ny mpanjifa ihany koa (Agents de caisse, Releveurs, …). Ny kalitaon’ny fandraisana no tena iompanan’ny fanofanana.